Yey kugu Dhex Dhiman Hibooyinkaagu! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Axmed Cabdi Qurbaawi — December 26, 2019
Ku soo dhawow 2020! "Yey kugu dhexdhiman hibooyinkaagu"!
Ku soo dhawow 2020!
“Yey kugu dhexdhiman hibooyinkaagu”!
Ma rumaysan kartaa in ay maalmo yari ka dhiman yihiin 2020? Ma garan karno in aan gaadhi doono, laakiin waa u sahan iyo sahay qaadaneynaa. Markii aan dhammeyno dabaaldegyada iyo wax ka barashadda sanadkii tagay waxaan diyaar u nahay in aan mar labaad dhaqdhaqaaqno hadday ahaan lahayd yool cusub oo aad rabto in aad bilowdo, ganacsigaagii oo aad wax ka badal iyo wadiiqo cusub u furi rabto, waxbrashadii aad sanadkii tagay ka gaabisay oo dib boodhka uga jafi rabto, guurso waad gabowdaye oo dhagahaaga ku bad badatey iwm. Haddaba waxaa la joogaa waqtigii aan ka fikiri lahayn kaliya himilooyinkaan horey ku soo xusnay in aan sanadkaan ka gun gaadhno.
Yoolashu waa furaha dhabayn kara dhamaan himilooyinkaga oo dhan. Dabcan waxaan u baahan nahay jaranjaro aan ku gaarno nidaamka iyo marinka i noo sheegaya jihada aan aadeyno iyo halkuu odoraskayagu yahay.
Qormadan yar waxay ibbo_fure u tahay qaabka Yoolka loo samaysto Inta ka hor’se waxaad u bahaan tahay seddex dariiqo oo lama dhaafaan ah si aad naftaada u siiso fursada ugu wanaagsan ee aad ku la socon karto yoolalkaaga.
1 — Qaado Hal Qaniinyo Markiiba
Weligaa ma maqashay oraahda, “Sida kaliya ee maroodiga loo cuno ayaa ah in aad qaniinto hal mar”?
Ma jecli in la cuno maroodiyaasha dabcan Somaliyana waaba ka dabar jarmeen, laakiin waxa aan ka hadlayaa waa Yoolasha waa weyn iyo hadafyadeena habka kaliya aan cuni karno/ uga faa’iidaysan karno waa runtii hal mar oo qaniinyo ah.
Ujeedka aan leeyahay waxaa weeye u goo-goo hadafyadaada gabal gabal yar oo la la gaari karo waqti cayiman, ka dibna ka dooro oo ku bilow midka kugu muhiimsan sidaas iskugu xiji-xiji dhamaantood siday kugu kala muhiimsan yihiin. Mar un hawadda qaniinin ee midba mar cun, kan ugu macaan/ugu fudud ha ka bilaabine ee kan kugu nacfiga roon ka bilow.
Tusaale ahaan: Ka soo qaad sanadkaan waxaad qorshaysatey in aad akhrido 52 Buug, tan macnaheedu waa isbuuc walba waxaan ka takhalusaysaa hal buug. Hagaag, ku raadi qaacidadayadii marka; ma xasuustaa? Haah ” sida kaliya ee maroodiga loo cuno waa in aad qaniinto hal mar” ma wadda cuni karaysid hal mar sidoo kale hal mar ma wada akhrin kareysid 52 buug, kolkaas waxaaa kula haboon in aad isbuuciiba mid cunto. Sidaasad sanadka 2020 ku cuntay 52 buug!
Maxaan Konton iyo labo buug dusha kaga saarey oo kugu xukumay isbuuc walba hal buug? Sababtoo ah waxaan isha ku hayaa kartidaada iyo in aad ka bixi karto shaqadaas, midna ogow jaalle/geenyo buuggaagtu waa halka ay ku rukuman tahay ugaxnta guushu, waa halka ay ka imanayaan heerka isbeddelka noloshaadda. Waxaan ku balan qaadi karaa horumar haddaad ii dhago nuglaato weelayso hadalkeyga. Helitaanka naftaadda iyo cid aad tahay waxay ku dhex daxalaystay buuggagta aad adigu ka caagan tahay!
Waan jeclahay layligan(52 Buug) sanadkii in aad ila qaadatey, sababtoo ah maahan keliya wax akhris, laakiin waa qodobka kowaad ee aad maanta samayn karto si aad u hirgaliso hadafyadaadda nololeed.
2 — Samee Habdhaqan Taageera Hadafkaga
Sanadkaan gabogabada ah markii aan dib kuu celiyo maxaa caqbad ah oo mar walba weesadda yoolkaga kaa jabin jirey? Laga yaabe jawaabtaadu in ay tahay siddan: “Waxay ii ahayd halgan aad u weyn, markii hore waxaa lahaa yool cad, waxaan isku dayey in aan ka sal gaadho hadafkeygaas. Waxaan moodayey in aan ku mashquulayo aan samaynayo wixii maankeyga ka guuxayey, maxaa yeelay waqti kasta waxaan ka fakari jirey in aan sanakaan (2019) soo afmeeri doono hadafkeyga”.
Hagaag, waad dadaashey, han sare waad leedahay, riyadaadu waa kuu cadahay, laakin hal su’aal marna ma isweydiisay maxaa kaa hortaagan marka? Mar haddaad awoodo, wax lagaari karo yahay, waqti kugu filan aad u heli karto, mugdi kaga jirin ee kuu cadyahay, dhowr maalmood aad qabtey kadibse ka hadhay oo ka caajistay?
Si fudud baan uga jawaabeynaa: Waxaan miscilil uga dhigayaa jawaabteyda Faylasuufkii weynaa Allaa weyne Aristole, wuxuu yidhi, “Waxaan nahay waxa aan ku celcelinno, hal ficil oo aad maalin su qurux badan u qabtay ma ahan wax ku dhisaya ee waxaa ku korinayaa waa caado maalin le ah”.
Ma jirayso hadaf kuu hirgalaya ilaa aad ka dhigto caado joogto ah oo isku waqti la galo isku waqtina laga baxo, taasina hal wax un baa ku hirgalin kara ” Waa in aad qortaa Yoolkaga” ilaa aad ka dhigto yoolkaga mid qoran wax hirgalaya ma jiraan. (Sidda Yoolka loo qorto iyo shuruudihiisa waan kula wadaagi doona idinka Alle)
Xidhiidh baa ka dhexeeya maskaxda, qalinka iyo waraaqda. Markii aad qorto Yoolkaaga waxaad yeelaneysaa hab-dhaqan, xitaa uma baahnid in aad ka fikirto ama go’aan ka gaadho waxyaalaha aad sameyn doonto. Adigu waad qoraneysaa uun, dabadeedna wadada ku qulqul. Markaad qorato Yoolkaga waxaad naftaada u dejinaysaa guul weyn!
3 — U hel Yoolkaga dad kugula xisaabtama
Prof: Ashok oo ah macalinkayga dhanka nolosha iyo falsafada wuxuu yidhi “La xisaabtanka ayaa ah istiraatiijiyadda ugu sarreysa ee lagula socdo wadada himilooyinkaga”.
La xisaabtanku wuxuu ku yimaadaa qaabab fara badan, laakiin kan ugu muhiimsan waa in aad hesho dad kula hadaf ah, aad isku meel geedi u tihiin. Mid fudud ma ah in aad hesho dad kula aragti iyo aduun arag ah. Waxaad iska caawineysaan in aad isla socotaan, isla xisaabtantaan, kiinna wadada ka weecda dhagta la soo qabto loona sheego inuu weecday.
Mararka qaarkood waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hal qof oo kaa caawiya waxna ka beddeli kara adduunkaga.
Tusaale: wuxuun bay la mid tahay lammaanaha/xaaskaga kugu dhiirigalisa in aad ku soo tukado Salaadda Subax masaajidka maalmahan aadan dooneynin in aad ka kacdid sariirta. Dadku waa cadowga labaad ee aad leedahay, haddana waxaa jira koox yar oo ay dhab ka tahay in ay ku caawiyaan. Ka go’an yahay horumarkaagu, ka qoro teleefoonadda kuwaas, waayo inta badan waa mashquul dadkaas. Mar kasta oo aad hoos u dhac dareento wac, si ay kugu hayaan yoolkaga, tamarna kuu siiyaan waayo waxay khabiir ku yihiin wadada aad hayso iyo geedka aad harsan rabto. Dadkaasi waxay had iyo jeer kor u qaadayaan niyaddaadda waxayna kugu soo celiyaan mar walba wadada guusha.
Soo hel oo qeex hal qof oo sanadkaan noqon doona wehelkaaga kugulana xisaabtama mid kasta oo ka mid ah yoolalkaaga luwa ugu waaweyn ee aad leedahay sanadkaan. Sameyso saxiib kaa tilaabiya isbaarooyinka joogtada ah ee midba midda kale kuu dhiibeyso sanadka 2020.
Ogaanshaha in uu jiro qof kula socda isbuuc walba ama bil walba wuxuu noqon doonaa mid kugu dhiirigaliya in aad is waydiiso talaabo kasta halka aad u qaadeyso. Halgan ka adag ma jiro midka aad naftaadda la gasho. U diyaar garow!
Soo hel ugu yaraan hal rafiiq oo aad isla-xisaabtantaan. Sameyso taariikh iyo waqti go’an oo aad kula kulanto haddii kale teleefoonka kawada xadhiidha. Guul! Hadda waxaad heshay xooggaa hub ah oo kaa caawineysa in aad jebiso yoolalkaaga sanadka 2020. Haddaba ka soo bax mareegta iyo nolosha Social media ee madhalayska ah una soo bax nolosha dhabta ah.
“Waa maxay hal hadaf oo cusub oo aad ku dhex biirin karto noloshaada sanadkan 2020 oo taakulayn doona mustaqblka adiga waalidkaa”?
Hadaad saddexdaa qodob soo qaadatey waxaan kula wadaagaya toddaba talaabo oo goolashaadda fure u noqon doonna: Miyaad cunaysaa Maroodiga hal tallaabo markiiba?
Tillaabadda 1-aad: Go’aan ka gaar wuxuu dhab kaa yahay rabitaankooddu. Waa in ay kuu cadahay waxaad rabto noloshaada oo dhan, hadday ahaan lahayd dhaqaale, xirfad-yaqaan, mid caafimaad wanaagsan ku nool iwm. Weydii naftaada maxaad dooneysaa sanadkaan in aad gaadho? Maxay yihiin xirfadaha cusub ee aad rabto in aad barato sanadkan? Isbedelo noocee ah ayaad dooneysaa in aad ku sameyso noloshaada shaqsiyadeed?
Tallaabada 2-aad: Qor ujeedooyinkaaga. Sidaan maqaalkii hore uga hadalnay waa muhiim in aad qorto yoolkaaga ha aaminin maskaxdaadda. Prof: Ashoke oo macalinkeyga dhanka Falsafadda dhiga ah maalin buu i waydiiyey Ahmed wax yool ah ma leedahay anoo geesi hadlayaan iri “Yes of course I do have it”.
Waxaan bilaabay in aan u sharaxo wuxuu yidhi “stop talking, just show me your goals” waxaan idhi “wax yool ah oo qoran ma jiraan, laakiin maskaxdaan ku hayaa”, wuxuu yidhi ” haddaba wax yool ah ma lihid ee waa riyootaa un, riyo bilaa yool ahan waa riyo un”. Markaad warqada ku xariiqdo yoolkaga waxay maskaxdu qaybta aan seexan 24 hours shaqaysaa siineysaa awood ay mar walba kugu xasuusiso yoolkaaga taasaana ah waxaad rabto in lagu xasuusiyo mar walba.
Jadwal kama dambeys ah oo cayiman u dajiso waxa aad doonaysid in aad gaarto. Tani waxay kugu dhiiri galinaysaa in aadan dayicin hal maalina. Waxay kugu kaakicineysaa xamaasad iyo in waqtigii aad qabsatey dhow yahay, walina aadan halkaa rabtey gaadhin. Hadafkaaga u kala qaybi gaballo yar yar. Mid walbana maalin cayin iyo taariikhda aad dooratey soo taabo.
Maalinkaad gaadho halkaad hamineysay u dabaal
dag naftaadda, adigu isku dabaal dag oo
naftaadda geeh maallo aad ugu abaal guddo, hilib
geel iyo caano siih, dhowr maalin nasi. In badan
ha nasan kadib yoolka xigga raacdee…. sidaas
ku wad un.
Liis garee wax walba oo aad ku gaari karto hadafkaaga. Ka fikiri dhan walba oo naftaadda ka xisaabi xagal walba. Kheyraad badan iyo fursado badan baa kugu ag dhiman raba, iyaga weelee oo garo in aad hodan tahay. Iska masax falalk iyo fikradaha toban ee oranaya waxba ma tihid iyo waxba lama gaadhi karo iyo aduunkiiba lagu kala tag, maxaa kuu haray adi iwm. Eeg ma jiro qof qofka kale qadartiisa nool, magaca waad ka sinaan kartaan Caasho ama Cali, laakiin ma jirto meel kale oo aad iskaga ekaan kartaan.
Aamin in aad wax tahay waxana noqon karto. Muhiimadu ma ah nolosha aad hadda ku nooshahay ee waa midda aad noqon rabtid. Tillaabadda 5-aad: Abaabul liiskaga u kala sooc wax ay muhiim tahay in la qabto hadda oo deg deg ah iyo wax muhiim ah laakiin aan hadda waajib ahayn.
Waa maxay waxa kugu muhiimsan maanta, maxaase xigga?
Tillaabadda 6-aad: Tallaabo qaad marka, ficil sameeh. Dhibka jiraa wuxuu yahay dadku inta badan talaabadda 6-aad bay ka bilaabaan iyagoo shanta kale soo marin taasa keenta in ay daalaan oo ka hadhaan yoolkooddii. Ficilku waa kan kala kala sooca guuleystaha iyo guuldareystaha. Dhaqso u dhaqaaq oo hadafkaaga qoran ficil u turjun.
Tillaabadda 7-aad: Maalin kasta samee sidii aad u gaari lahayd hadafkaga. Ku tababar naftaadda ficil maalin la ah. Ha sameynin wax cudur daar ah. Kaliya kuwa u diyaar garooba in ay ka shaqeeyaan yoolkoodda maalin walba siday u gaari lahayeen hadafyadoodda ayaa runtii ku guuleysan doona 2020.
“Hadda 80% waan fuliyey sidda Yoolka loo dhiso iyo tiirarkiisii, kaliya waxaa kuu dhiman sidda loo qorto oo loo tafaariiqeeyo. Ma garan karo tallooyinka muguc iyo miisaan badan toddobadaan tilaabo. Yey kugu dhex dhiman hibooyinkaagu”!
Goolasha labaan u kala qaadaynaa:
Qaybta # 1
Hadda qoro 10 Gool oo aad jeceshahay in aad sanadkaan gaadho (2020).
Hadda, weydii naftaada, indha indheeh dhamaan goolashaadda. Ma jiraa hal gool oo aad la’aantii jiif iyo joogba ka tagayso? Kan kugu muhiimsan dhagta soo qabo. Markaad doorato yoolka kugu muhiimsan ee aad jeceshahay in aad ku guuleysato sanadkaan, ku qoro warqad nadiif ah. Goolkaas wuxuu noqon doonaa meesha aad hiigsaneyso.
QAYBTA # 2
Saddexdeyda gool ee ugu muhiimsan waa:
Waqtigeyga ugu dambeeya ee aan yoolkaan ku gaadhi karo waa:
Saddexda arrimood ee ii suurta galin kara in aan gaadho yoolalkaas waa:
Saddexdeyda gool ee xigga waa:
Saddexdeyda gool ee ugu danbeeya waa:
. Waqtigeyga ugu dambeeya ee aan yoolkaan ku gaadhi karo waa:
. Saddexda arrimood ee ii suurta galin kara in aan gaadho yoolalkaas waa:
Hagaag, hadda yoolkaagu waa ku cadyahay iyadoo laga ilaaliyey isku-dhexyaac. Hadda ujeedkaagu waa ku cadyahay. Waa taqaan wax mudnaanta kowaad, labaad iyo saddexaadba ku leh. Hadda waa waqtigii aad u dhaqaaqi lahayd una kabo gashan lahayd guushaadda. Raac Hab qoraalka aan u qorey marka hore 3-saddexda qodob, kadib 7-talaabo, ugu danbeyna goolshaadda ku gabogabeeh. Haddii aad hirgaliso qoraalkaan dadaalkeedna la timaado anaa balan qaadayaa in noloshaadu u keen doonin sanadkii tagay 2019.
2020 Waad guuleysan, noloshaaduna waa is badali doontaa. Yey kugu dhex dhiman hibooyinkaagu!
Tags: Yey kugu Dhexdhiman Hibooyinkaagu!
Next post Bilacda Magaalooyinka Soomaaliya Miyaa Laga Quustay!?
Previous post Yaa Qaraxa Mas'uul Ka ah?
Hal Qabsigii iyo Xikmadihii Dadkii Hore 5.17 views per day | by Cabdiraxmaan Maxamed Warsame